चीनबाट छोराछोरी आएपछिको खुसी, ‘बल्ल छटपटी सकियो’ मेयर भन्छन्– हेथ डेस्क राखियोस् – Kite Sansar
चीनबाट छोराछोरी आएपछिको खुसी, ‘बल्ल छटपटी सकियो’ मेयर भन्छन्– हेथ डेस्क राखियोस्
४ फागुन, काठमाडौं । आइतबार बिहान नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुदाँ धेरै अभिभावक खुसी भए । उद्धारका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाएका उनीहरूले तब सन्तोषको स्वास फेरे, जब छोराछोरीले भक्तपुर खरिपाटीस्थित क्वारेण्टाइनस्थल पुगेर आराम गरिहरेको बताए ।
‘बल्ल हाम्रो छटपटी सकियो, जस्तै भए पनि आफ्नो देश भनेको आफ्नै हो,’ एक अभिभावकले छोराछोरी नेपाल आइपुगेको खुसी अनलाइनखबरसँग साट्दै भने ।
अबका १४ दिनसम्म क्वारेण्टाइनस्थलमा रहने छोराछोरीलाई भने उनीहरूले भेट्न पाउने छैनन् । सन्तानसँग भलाकुसारी गर्न नपाए पनि आफ्नै देशमा रहेकाले सँगै भएजस्तो लागेको अर्का एक अभिभावकले बताए । भने, ‘१५ औं दिनमा त भेटिहाल्छौं नि, अब त केही भए पनि आफ्नै देशमा त हो ।’
१७० जना अभिभावक जसरी खुसी भइरहेका छन्, ठ्याक्कै त्यसको विपरीत केही अभिभावकको छटपटी भने अझै सकिएको छैन् । छोरोछोरीको पर्खाइमा रहेका ती अभिभावक त्यतिबेला निराश भए, जतिबेला विमानस्थलमा आइपुगेका छोराछोरी ज्वरो आएका कारणले उतै फर्कनु पर्‍यो ।
यो पनि पढ्नुहोसकोरोनाले निम्त्याएको यात्रा : वुहानदेखि खरिपाटीसम्म
एक अभिभावकले निराश हुँदै भने, ‘आउने तयारी भइसक्दा ज्वरो आएकाले उतै राखिएछ । ज्वरो आएको भनेपछि झन् डर पो लागिरहेको छ ।’
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, ४ जनामा ज्वरो देखिएकाले उनीहरूका २ परिवारका गरेर ६ जना नेपाल आउन पाएनन् । त्यसैगरी नेपाल आउन आवेदन दिएका चार जनाले उतै बस्ने निर्णय गरे । सोही कारण १७५ जना नेपालीको उद्दार गरियो ।
‘स्थानीयका लागि हेथ डेस्क राखियोस्’
चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र आफ्नो क्षेत्रका जनताको सुरक्षाको चिन्ताले खरिपाटीमा राख्नेबारे विरोध भएको बताउँछन् । ‘यहाँ राख्नै दिन्नौंभन्दा पनि, अन्यत्र नराखीकन किन यहाँ राखियो र यहाँको जनताहरूको सुरक्षा के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालीहरू नै हुन्, बसून् तर त्यहाँको स्थानीयहरूलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मा सरकाले लिने कि नलिने ?,’ नगर प्रमुख मिश्रको प्रश्न छ ।
अहिले पनि स्थानीयहरूको सुरक्षा र उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने अडान नछाडेको उनी सुनाउँछन् ।
खरीपाटीका स्थानीयहरूका लागि आजैबाट सरकारले निःशुल्क हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । डराइरहेका स्थानीय ज्वरो तथा रुघाखोकी देखापरेमा थप अत्तालिन सक्ने भन्दै उनल हेल्थ डेस्क आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले आजैबाट त्यहाँ निःशुल्क हेल्थ डेस्क राखेर जाँच गरेदेखि स्थानीयहरूको त्रास घट्थ्यो,’ नगर प्रमुख मिश्रले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो पनि पढ्नुहोसचीनबाट आउनेका लागि यसरी तयार छ ‘खरिपाटी क्वारेन्टाइन’
क्वारेण्टाइनमा १४ दिन के हुनेछ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार क्वारेण्टाइनमा राखिएका विमानका क्रू मेम्बरलगायत सबैलाई हरेक दिन जाँच गरिन्छ । जाँच गर्दा ज्वरो या रुघाखोकी देखिए तत्काल एम्बुलेन्समार्फत अस्पतालहरूमा ‘आइशोलेसन’मा राख्न पठाइन्छ ।
लगातार १४ दिन नै कोरोना संक्रमण भए/नभएबारे परीक्षण गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू खटाइएको छ । उनीहरू सबैको २४ घन्टाभित्र थ्रोट स्वाब (घाँटीको र्‍याल) को नमूना झिकेर प्रयोगशालामा पठाइनेछ ।
क्वारेण्टाइनमा राखिएकाहरूको निगरानी गर्न सेना र प्रहरीका ८० जना स्वास्थ्यकर्मीहरू खटाइएको छ । उनीहरूले पालैपालो निगरानी गर्नेछन् ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको हरेक दिन दुईपटक ज्वरो नाप्ने काम हुनेछ । यसका लागि क्वारेन्टाइनमा हरेकका लागि छुट्टाछुट्टै थर्मोमिटरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त थर्मोमिटरको माध्यमबाट उनीहरूले शरीरको तापक्रम जाँच गरी तोकिएको ढाँचामा अभिलेख गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स २४ घण्टा नै तैनाथ गरिएको छ । यीमध्ये कसैमा ज्वरो देखिएमा एम्बुलेन्समार्फत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगिनेछ ।
विद्युत् तालिम केन्द्रको ४ वटा ब्लकमा ६० वटा कोठा राखिएको छ । जसमा एउटा कोठामा ३ जनासम्मको समूह बस्न सक्नेछन् । एउटा शौचालय ६ जनाले प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यावस्थापन गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खाना, पानी र इन्फेक्सन कन्ट्रोल सबैको व्यवस्थापन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छ ।
विशेष किसिमको क्लिनिक, हरेक व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै मास्क र स्यानिटाइजरको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोसचीनबाट नेपालीको उद्धार ढिलो हुनुको भित्रीकथा
मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा अन्य मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै क्वारेण्टाइनमा बस्दा कुनै किसिमको समस्या भए खबर गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेका छौं । अब क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई भेट्न नगएर आफन्तले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’
ग्लोबल अवस्था के छ ?
कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण एक जना चिनियाँ पर्यटकको फ्रान्समा मृत्यु भएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण एसियाबाहिर भएको यो पहिलो मृत्यु हो ।
चीनबाहिर हङकङ, फिलिपिन्स र जापानमा एक–एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो । चीनभित्रै हालसम्म १५०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । यसबाहेक २४ मुलुकका ५ सयभन्दा बढी संक्रमित छन् ।
नेविको बिस्कुट उद्योगमा आगलागी
आजै मन्त्रीको सपथ लिँदै शिवमाया तुम्बाहाङ्फे : उपसभामुख पद गुमाउँदा मन्त्री पद ‘उपहार’